Ubugcisa bePixel kunye ne-Octavi Navarro zihambelana kakhulu | Izidalwa ezikwi-Intanethi
URon Gilbert ngu omnye wabayili bemidlalo abaziwayo ngokuzisa iigugu ezinje ngezifakelo ezimbini zokuqala zeMonkey Island kunye neNdlu eNkulu yeManiac. Eminye imidlalo yevidiyo eyenziwe phantsi kweLucasarts kwaye yayinokukhankanywa okhethekileyo kunyango olubonwayo ngenxa yobugcisa be-pixel.
Saqala ngoGilbert ukuthetha ngeNavarro, a umyili ozelwe e-Barcelona Kwaye uzenzele ilizwe lakhe ngobugcisa be-pixel obumenze ukuba asebenze namhlanje kwenye yeeprojekthi zikaGilbert zamva nje. Kungenxa yoko le nto sabelana ngeminye yemisebenzi ekumgangatho ophezulu.
UNavarro naye wayenayo ukuncoma okukhulu ubugcisa beepikseli Kuba wayene-Commodere yakhe engama-64 apho ngokuqinisekileyo wayeza kudlala iigugu ezinqabileyo zemidlalo yevidiyo. Umsebenzi wakhe wobugcisa kwii-8bits umvumele ukuba asebenzele abathengi abafana nePenguin Random House, iLa Caixa okanye i-El corte Inglés.
Umyili ozinikele kakhulu kubugcisa be-pixel kwaye kwiziqwenga zakhe ngamnye sifumana unyango olukhethekileyo Oko kungasisa kwezo ndawo zibonwa kwiNdlu yeManiac okanye kwezo ziQithi zeMonkey, apho unokubona khona ukuba basela kumthombo wokhuthazo ababekho kwaye bangabo.
Octavi kukhokelela umsebenzi wakhe ezakhe iindlela zokupenda yeyiphi ipikseli yobugcisa kuyo yonke intsingiselo yayo. Kumzekeliso ofanayo, uyakwazi ukubonisa amabali ahlukeneyo ukwenza ukuba ngamnye wabo abe yinto ekhethekileyo ngokwawo.
Okwangoku ukhona usebenza noRon Gilbert kunye noGary Winnick kumdlalo we-adventure we-Thimbleweed Park oqwalasele kakhulu ubugcisa be-pixel, indlela ebonakalayo apho i-Octavi Navarro ihamba njengentlanzi emanzini.
Unayo iwebhusayithi yakho, facebook wakho y yakhe twitter ukulandela umsebenzi wakhe obalaseleyo kubugcisa be-pixel.
UMark Ferrari kutshanje unike isifundo esikhethekileyo sevidiyo malunga nobugcisa beepikseli.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » U-Octavi Navarro kunye nonyango olukhethekileyo kubugcisa be-pixel
Yonke into ipholile!